Hatramin’ny faran’ny herinandro: hitohy ny hatsiaka eto Antananarivo | NewsMada
Hatramin’ny faran’ny herinandro: hitohy ny hatsiaka eto Antananarivo
Alizay antonony mihamalefaka miandalana ny mandrafitra ny toetry ny andro eto Madagasikara. Hitohy hatrany ny orana malefaka any avaratra atsinanana: Sava, Analanjirofo ary Atsinanana. Handrahona ny ilany atsinanan’ny afovoan-tany fa mety harahina erika indraindray any Alaotra-mangoro. Handrahona na hahazo masoandro ny faritra sisa.
Hitohy ny volon’andro ririnina eto Antananarivo, anio hatramin’ny faran’ny herinandro, araka ny fanazavan’ny teknisianina mpamantatra ny toetry ny andro, omaly. 11°C ny maripana ambany indrindra ary 22 °C kosa ny ambony indrindra. Somary hanjaka ny zavona ho an’ny vao maraina fa hisava ihany mandritra ny tontolo andro. Rehefa tsy misy ny erika, midina ny maripana ambany indrindra ary mahatsapa hatsiaka ny olona. Ny zoma ho avy izao, 10°C ny maripana ambany indrindra eto Antananarivo. Mbola mila miomana amin’ny akanjo mafana ihany ny rehetra izany hatramin’ny faran’ny herinandro.
Momba ny rotsak’orana, ny herinandro lasa, antonony ny rotsak’orana (50 hatramin’ny 100 mm) tany amin’ny distrikan’i Sambava ary antonony izany (25 hatramin’ny 50mm) any amin’ny distrikan’Antalaha sy any Sainte-Marie. Amin’ity herinandro ity, malefaka ny rotsak’orana (25 hatramin’ny 50 mm) any Sambava, any Antalaha, any Sainte-Marie, any Mananara Avaratra, any Soanierana Ivongo, any Fenoarivo Atsinanana ary any Toamasina.